Zodiac: Jacayl, lacag, caafimaad, halkan waa horoscope aad Isniinta 8 APRIL 2019 - CAYMISKA PLUS MAG
ACCUEIL » QODOBO »Zodyak: Jacayl, lacag, caafimaad, halkan waa horoscope aad Isniinta 8 April 2019 - HEALTH PLUS MAG
Zodiac: Jacayl, lacag, caafimaad, halkan waa horoscope aad Isniinta 8 April 2019 - CAAFIMAADKA MACMIILKA MAGA
Zodiac: Jacayl, lacag, caafimaad, halkan waa horoscope aad Isniinta 8 April 2019
Subax kasta, waxaad ka heleysaa xargahaaga maalinta aad ka soo baxdid dhacdooyinka sugaya. Miyaad dooneysaa inaad sameyso go'aano wanaagsan? Miyaadse fiirineysaa calaamadaha nolosha ee kuu soo diraya? Miyaadse fiirineysaa caafimaadkaaga? Su'aalahaadu waxay ugu dambeyntii helayaan jawaabtooda! Calaamad kasta oo ka mid ah jiliyada, ogow waxa xiddiguhu kuu hayaan maalin kasta ...
Jacayl, shaqo, lacag ... Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan waxa ku sugaya Maalinta Abriil 8, la tasho barxaddaada iyadoon dib u dhigin!
Aries (21 Maarso - 20 April)
Jacayl iyo lacag: Dhalasho farxad leh ku dhalatay Rams oo ku dhashay maanta! Maalintani waxay ku siineysaa mashaariic shaqo oo cusub oo u baahan khatar yar. Qaybta wadnaha, waqti u qaado inaad kula sheekaysato xaaskaaga oo aadan isku xirin mowduucyo xun.
Caafimaad: Wanaagsanaanta jirkaaga iyo maskaxdaada, qaado waqti aad naftaada u hesho oo aad u furtid khibrado cusub oo soo jiidaya jidkaaga. Kalfadhiyada nasashada waxay kuugu fiicnaan doonaan wanaag.
Bull (21 Abriil - 21 Maajo)
Jacayl iyo lacag: Maalintan ma aha mid waxtar u leh maalgashiga. Xaaladda maaliyadeed ayaa laga yaabaa inay saameyn karto oo khatartaada khatarta u keeni doonta inay horseeddo khasaaro. Dhinaca wadnaha, u fur furan iyo mudnaanta lammaanahaaga wada hadalka.
Caafimaadka: Ha ilaawin inaad taxaddar u yeelatid caafimaadkaaga inta aad dhegeysaneyso jirkaaga. Ma jiraan wax dhib ah oo aad ku shaqeyneyso.
Jacayl iyo lacag: Sababtoo ah maalgelin xun, xaalada dhaqaale ma fiicna. Isku day inaad sameyso go'aano badan oo mustaqbalka ah. Wadnaha, waxaa laga yaabaa in aad la socoto wakhti adag adiga iyo saygaaga / xaaskaaga, hase yeeshee ha iska dhicin. Maanta waa fursada ugu fiican ee aad dhibaatooyinkaaga ujirto!
Caafimaadka: Ha ka deynin dhaqdhaqaaqaaga ciyaaraha marwalba in culaysku kaa saaro. Sii diyaari, berrito waa maalin kale!
Kansarka (22 Juun - 22 July)
Jacayl iyo lacag: Maanta waa maalin wanaagsan oo gorgortan ah! Ku kalsoonno xiddigaha nasiibka leh, xiddigahu waxay ku yaaliin dhinacaaga si ay u sameeyaan go'aanno dhaqaale oo wanaagsan. Wadnahu waa waqtigii ugu fiicnaa ee aad ku baxdo oo aad la wadaagto xaaskaaga. Habeen wanaagsan waa furaha!
Caafimaadka: Waa wakhti aad ku sameyso go'aano fiican oo ku saabsan caafimaadkaaga oo aad dib ugu noqotid cayaaraha!
Lion (23 July - 22 August)
Jacayl iyo lacag: Fikradaha aad soo jeedinayso ma noqon doonto mid waxtar leh, waxaana laga yaabaa inay ku diidaan asxaabtaada. Dhinaca wadnaha, dhacdooyinka dibadda waxay saameyn karaan xiriirkaaga. Miisaaniyad cusub oo awood leh ayaa laga yaabaa in la dhiso adiga iyo lammaanahaaga.
Caafimaadka: Isbedelka xaaladaha noloshiisa gaarka ah waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo miyir-beel iyo madax-xanuun.
Virgin (23 Agoosto - 22 September)
Jacayl iyo lacag: Maanta waad nasan kartaa. Qorshahaaga ayaa si fiican loo helayaa waxaana dadaalkaaga lagu abaalmarin doonaa shaqada. Dhinaca wadnaha, naftaada wax badan oo la heli karo oo u fur furan cusub.
Caafimaadka: Waxaad ku jirtaa qaab wanaagsan, laakiin waxaad u leedahay muhiimad aad u weyn caafimaadkaaga kuwa kugu dhow.
Balance (23 September - 22 Oktoobar)
Jacayl iyo lacag: Wadahadaladu si fiican ayay u socdaan oo dhaqaalihiina si wanaagsan ayuu u shaqeynayaa. Waxaa intaa dheer, waxaad heli doontaa soo jeedin cusub oo xiiso leh oo ku saabsan mashaariicda mustaqbalka. Qaybta wadnaha, waxtarkaaga iyo dabiicigaaga ayaa kaaga ciyaari doona raalli ahaanshahaaga. Isu diyaari si aad u dhisatid xiriiro joogto ah.
Caafimaad: Jirkaaga iyo maskaxdaadu waxay ku jiraan isku dheelitirnaan buuxda. Ka digtoonow in aadan shaqeynin inta lagu jiro howlaha cayaaraha.
Scorpion (Oktoobar 23 - Nofeembar 22)
Jacayl iyo lacag: Talada saaxiibadaada ayaa ku hagaysa go'aannada maaliyadeed ee wanaagsan. Wadnaha dhinaca, xaaladdu ma fiicna. Si kastaba ha noqotee, waxaad dejin kartaa xiisadaha adiga oo qorsheynaya safar laba ama nasasho nasasho ah oo jacayl ah.
Caafimaadka: Waxaad joogtaa mashaariicdaada si aad waqti u hesho nasasho yar. Jidhkaaga ayaa u baahan.
Sagittarius (Nofeembar 23 - 21 December)
Jacayl iyo lacag: Haddii aad rabto inaad bilowdo mashaariic cusub, maanta waa maalin wanaagsan oo gorgortan ah. Nasiib ayaa ku taala dhinacaaga. Dhinaca wadnaha, waxaad ku nooshahay daqiiqado jilicsan oo buuxa jacayl iyo jilicsanaan.
Caafimaadka: Fayo-qabkaagu waa muuqan yahay. Qaado fursada aad ugu gudbin karto tamarta wanaagsan ee kuwa kugu xeeran.
Kornayl (22 December - 20 January)
Jacayl iyo lacag: Ku kalsoonow niyadda wanaagsan iyo daacadnimada kuwa kugu xeeran. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso maalgelin wanaagsan. Qalbigaa, ha u ogolaan in niyad-jebisku kaa kugu dhaco oo ku siiyo habab aad kula kulmi karto dad cusub.
Caafimaadka: Kulannada jimicsigaagu waa mid miro dhal ah, caafimaadkaagana waa la isku halleynayaa. Bravo!
Jacayl iyo lacag: Munaasabadaha aan la qorshayn waxay carqaladayn karaan ganacsigaaga. Sug inta aad saxda tahay haddii aad rabto in aad maalgaliso mashruuc cusub. Dhinaca wadnaha, dhibaatooyinka ku ururaya waxay saameeyaan xidhiidhkaaga. Fadhiiso oo wax walwal ah ku sii daa lammaanahaaga.
Caafimaad: Shaqada shaqadu waxay bilaabataa inay dareento. U ogolow naftaada nasashada nasashada si aad u nasatid oo aad dib u hesho tamartaaga lumay.
Kalluunka (20 February - 20 March)
Jacayl iyo lacag: Nadiifintaadu waxay keeni kartaa go'aammo xun, gaar ahaan marka ay timaado lacag deyn ah. Noqo mid dhexdhexaad ah waxaad samaynayso maanta. Dhinaca wadnaha, muuji qadarka lammaanahaaga. Wuxuu u baahan doonaa.
Caafimaadka: Jir ahaan, waxaad samaynaysaa si fiican laakiin niyadjabkaaga nafsiyadeed ma fiicna. Sii maskaxdaada fikradaha waxyeellada leh ee kugu garaacaya.
Talooyin: Daawooyinka dabiiciga ah si ay ula dagaallamaan aargoosiga: "jaan qaad" khariidado aad u daran